Mogadishu Journal » Isbadal lagu sameeyay Qaar kamid ah gudoomiyaasha Degmooyinka G/Banaadir
Isbadal lagu sameeyay Qaar kamid ah gudoomiyaasha Degmooyinka G/Banaadir
Muqdisho:-Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa is badal ku sameeyay qaar kamid ah Gudoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir.
Wareegto kasoo baxday Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa gudoomiyaha degmada Shibis loogu magacaabay Cali Axmed Cabdulle (Cali Soomaali) oo ahaa Wariye kasoo shaqeeyay Idaacada Shabelle ee Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale xilka ka qaaday Gudoomiyihii degmada Dharkeenley, waxa uuna degmadaasi Gudoomiye uga dhigay Guddoomiyihii hore ee degmada Xamar Jajab Guhaad Sh. Xasan .
Duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale u magacaabay Xoghayihii degmada Dharkeenley Mudane Maxamed Suudi in uu noqdo Guddoomiyaha cusub ee Degmada Xamar Jajab .
Isbadalkan Gudoomiyaha gobolka Banaadir ku sameeyay qaar kamid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka Banaadir ayaa kusoo aadaya xili wada shaqeyn xumo baahsan ka dhaxeeso Gudoomiyaha gobolka iyo Gudoomiyaasha degmooyinka qaar.
Qaar kamid ah Wadooyinka Muqdisho oo saakay la xiray iyo Sababta keentay